Waa maxay sababta uu hal Garsoore u dhex-dhexaadiyo kulammada kubadda cagta?… (Goormee ayey soo bilaabatay, imise garsoore ayaase kulammada garsoori jiray markii hore?) – Gool FM
Waa maxay sababta uu hal Garsoore u dhex-dhexaadiyo kulammada kubadda cagta?… (Goormee ayey soo bilaabatay, imise garsoore ayaase kulammada garsoori jiray markii hore?)
(World) 01 Sebt 2019. Garsoorka waa kan u dub dhexaadka u ah ciyaar walba oo dunida laga ciyaaro, balse si gaar ah kubadda cagta waa mid xasaasi ah marka la soo hadal qaado sheeko ku saabsan garsoorka hadana ka hadleysa habsameysigii garsoorka casriga ah.
Marka laga tago kubadda cagta casriga ah ma jirin in hal garsoore kulan uu dhex-dhexaadiyo, waxaana jiri karay in ka badan hal garsoore oo ciyaarta dhex dhexaadinayay tiyoo ay jirto inuu mid walba uu seerigiis watay.
Maxay ku dhacday in labo garsoore ama ka badan ay kulan kubadda cagta dhex-dhexadiyaan? habka looga gudbay iyo tahriikhda garsoorka ee kubadda cagta casriga ayaan eegi doonnaa.
Xogo badan oo laga yaabo in aadan waligaa ka maqlin garsoorka ayaan halkan kuugu soo gudbin doonaaye fadlan ka daawo muuqaalka hoose fikirkaagana inala wadaag inshaa Allaah.
Shaxda rasmiga ah kulanka adag kooxaha Villarreal vs Real Madrid ee horyaalka La Liga.